hal-abuurka Soomaalida oo lagu soo gebagabeeyay
magaalada Gothenburg ee dalka Sweden. 04 - 05 May, 2012
Jimce -Sabti, May 04 - 05, 2012 - Bandhiggii Kulan looga hadlayay hal abuurka iyo dhaqanka afka- Soomaaliga ayaa xalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Gothenburg ee dalka Sweden, iyadoo gabagabda kulankaasina lagu soo
bandhiggay Buuggaag la hadleysa dhaqanka Soomaalida.
Kulanka ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Soomaalida ku nool magaalada Gothenburg , waxaana ka qeyb gallay dad isugu jira Soomaali iyo Sweden,
intii uu kulankaasi socday ayaa lagu soo bandhiggay Suugaan iyo Hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed.
Abwaanniintii ka hadashay kulanka ayaa waxa ay shegeen in lagama maarmaan tahay in ummadda Soomaaliyeed ay ku dadaallaan sidii loo helli lahaa nimaad
ku salleysn dhaqanka, isla markaana loo sii xoojin lahaa kulammada lagu soo
Ugu dambeyntii kulanka ayaa lagu soo bandhiggay Buuggaag ka hadleysa Hal abuurka iyo Hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, kuwaasi oo ay ka faa’ideysteen dadkii ka soo qeybgalay kulanka iyadoo ay halkaasina hadallo ka jeediyeen;-.
2. C/casiis Cali Ibrahim "Xildhiban " – Xildhiban Publications
3. Max’ed Sh. Xassan Nuur – Scansom Publishers